डा. केसीका माग पूरा भइसके, हाम्रो पीडा कसले सुन्ने? : दुर्गा प्रसाइँ - Ujyaalo Nepal
डा. केसीका माग पूरा भइसके, हाम्रो पीडा कसले सुन्ने? : दुर्गा प्रसाइँ
By ujyaalo	 Last updated Nov 12, 2019 208
उनले सरकारले २०६८ सालमा मेडिकल कलेज खोल भनेर अनुमति दिएको तर आज २०७६ सालसम्म आउँदा लाइसेन्स नपाएको भन्दै गुनासो गरे ।
उनले भने, ‘मैले एक हजार जनालाई रोजगारी दिएको छु म चाहि माफिया रे कसरी म माफिया भएँ ? मैले मेडिकल कलेज खोल्न खोज्दा र क्यान्सर अस्पताल खोल्नु अपराध हो ? तपाइँहरुले नै भनिदिनुस् ।’
उनले डा केसीका माग पूरा भइसकेकाले अब राखेका माग जायज नभएको बताए । उनले जहिले पनि गोविन्द केसीमा माग पूरा गर्नुपर्यो भनेर हिंड्नु आवश्यक नरहेको बताए ।
उनले गोविन्द केसीलाई अनसनमा राखेर को को मानिस अघि बढे? त्यो घाम जतिके छर्लंग भएको बताए । गोविन्द केसीको माग काठमाडौं उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेको होइन ? तर मैले सुदूरपूर्वमा गएर मेडिकल कलेज खोलेको छु ,मैले किन अनुमति नपाउने त ?
सबैभन्दा अन्याय र अत्याचारमा परेको व्यक्ति आफू भएको भन्दै आफूलाई माफिया नभन्न आग्रह गरे । शिक्षा र स्वास्थ्यका नाममा अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गएको भन्दै देशभित्र मेडिकल कलेज खोल्ने अभियानमा लाग्नुपर्नेमा त्यसो नभई विरोध हुनु आपत्तिजनक भएको बताए ।
उनले डा केसी अनसन बसेर चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई काम गर्न नदिएको बताए ।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७६, मंगलवार १०:०८